Chicken disease | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Chicken disease
Aretina hohanina: Ny soritr'aretina, ny fisorohana ary ny fitsaboana
Eto amin'ity tontolo ity, ny fambolena biby na fambolena dia iray amin'ireo sampan'ny fambolena indrindra. Saingy mba hitomboan'ny vorona madio dia mila manara-maso ny fepetra amin'ny fisamborana. Ny tombony ho anao dia miankina amin'izany. Zava-dehibe ny manamarika ny zava-misy fa miankin-doha amin'ny sakafo mahasalama sy mikroklima ny aretina maro.
Inona no tokony hataony raha miparitaka ny raboka, rizareo, ny aretim-pivalanana: ahoana no fomba fitsaboana aretina
Ny mpihantona dia malaza amin'ny tantsaha sy tompon'ny toeram-piompiana madinika. Быстрые темпы роста и простота в содержании привлекают многих. Будущим владельцам будет полезно узнать, какие болезни могут проявиться у цыплят, каковы их симптомы и лечение.Fanohanana ireo mpihinam-bary amin'ny aretina Ireo mpihetsiketsin'ny andro iainana dia tena malemy loatra, noho izany dia mitaky fikarakarana manokana izy ireo.
Maro ny tompona toeram-pambolena sy toeram-pambolena sy fiompiana, mividy hanina akoho, mieritreritra fa ho mora kokoa sy azo itokisana kokoa ny hampiroborobo ny akoho toy izany amin'ny fampiasana tsiranoka azo antoka. Ary maro no efa lasa toy izao. Na izany aza dia hita fa ny ampahany sasany amin'ny tsy fahampiana faratampony dia manampy amin'ny tombotsoany, ny toerana iray manan-danja indrindra dia ny aretin-kiran'ny akoho amorom-paty, izay mora fantatra ny soritr'aretina, ary ny fomba fitsaboana notsaboina nandritra ny taona maro niainany.
Vahaolana amin'ny ratra "Baytril" 10% - torolàlana ampiasaina
Androany dia hiresaka momba ny zava-mahadomelina toy ny "Baytril", izay ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana tranainy. Ampiasaina mba hisorohana ny mycoplasmosis sy ny bakterialin'ny vorona domestika. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra momba ireo toetra tena manan-danja amin'ity fitaovana ity ianao. Famaritana, fampisehoana ary famoahana ny zava-mahadomelina Ny zava-mahadomelina dia misy 25 g of enrofloxacin.
Ahoana no fomba fitsaboana ny aretim-pivalanana ao anaty akoho
Ireo mpihantona dia efa ela no nipoitra tao amin'ny toeram-pambolena sy ny tokantrano. Misy antony hanaovana izany - ny akoho toy izany dia tsy dia mendri-piderana loatra ary mikiry haingana. Saingy matetika izy ireo dia manolotra olana amin'ny tompony. Ny iray amin'ireo olana mahazatra indrindra dia ny fitsaboana amin'ny vorona, noho izany dia mitaky fiheverana manokana ny olana.
Ny fomba fitsaboana ny aretim-pivalanana ao anaty akoho
Ireo tantsaha novokarin'ny mpikabary dia miompana amin'ny fambolena mpihinam-bary, mety hiatrika fitsapana toy ny diarrhea volo. Inona no antony mahatonga ny aretina sy ny fomba hiatrehana izany, no hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity? Ny vokatry ny aretim-pivalanana Ny vokatry ny aretina vokatry ny harona dia mety: aretina vokatry ny toe-javatra mahantra; ambany kalitao ambany; nahazo marary.
Ny fomba sy ny fomba tokony handraisana ny coccidiose amin'ny akoho
Ny akoho, toy ny akohon'ny olon-dehibe na ny karazam-biby hafa, dia mety ho voan'ny aretina isan-karazany. Iray amin'ireo karazan'aretina malemy indrindra amin'ny aretina ny coccidiose. Andeha hojerentsika akaiky ny atao hoe coccidiose, nahoana izy io ary ahoana no fomba hanesorana ilay vorona hanaisotra io aretina io. Inona no atao hoe coccidiose? Coccidiose dia aretina manasitrana vokatry ny vovobonin'ny coccidia.
Inona no tokony hatao raha tsy mitombo ny akoho?
Ny fitomboan'ny rongony dia mety hiteraka olana maro ho an'ireo tantsaha mpihinana aina: eo amin'ny sehatra voalohany eo amin'ny fiainany, ny akoho dia tena mahatsapa ny fepetra ivelany - ny fanovana rehetra dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fivoarany. Mba hisorohana izany dia ilaina ny manara-maso tsara ny toetr'andro amin'ny toetr'andro, manara-maso ny sakafony, manao fepetra fisorohana mba hiadiana amin'ny aretina, ary koa hahafantarana ny antony fototra mahatonga ny fitomboan'ny tanora.
Ahoana no hanasitranana ny nendratra, ny fikoropahana, ny fanenjehana ny akoho sy ny akoho
Ao anatin'ny dingan'ny fanavotana ireo vorona, indraindray dia mety ho tratry ny aretina toy ny kohaka sy ny fakana aina. Mety ho tratran'ny aretina hafa koa ny hafa, toy ny fofona mivaingana, fisidinana isan-karazany. Ny tsy firaharahiana ireo soritr'aretina ireo dia mety hahatonga ny fahafatesan'ny vorona sy ny fahaverezan'ny ampahany lehibe amin'ny mponina.
Inona no tokony hatao raha misy tongotra ny akoho iray
Ny ankizivavy, amin'ny ankapobeny, dia tsy an'ny vorona, ny votoatin'izany dia mifandray amin'ny olana manokana. Saingy ny olon-dehibe ihany no sarotra sy tsy mendrika. Ny akohokely, mifanohitra amin'izany, dia zavamaniry mihanaka sy mora vidy, mety simba izy ireo na dia amin'ny fikorianan'ny hazavana na ny fihenanam-bidy tsy misy dikany aza. Fa indraindray ao anaty akoho mahasalama, dia misy ny fanelingelenana hafahafa, toy ny fandefasana tavy: tsy mahitsy ny vorona ary toy ny hoe mipetraka eo amin'ny kofehy.
Nahoana ny zana-kisoa no manana elatra
Ny mpihinana foana dia mila mitandrina foana amin'ireo mpamboly, satria tsy afaka manohitra ny voka-dratsin'ny tontolo iainana ny tsy fahampian'ny zaza tsy ampy taona. Raha tsy mamaly avy hatrany ny olana misy ianao, dia mety ho very ny biby rehetra.
Ahoana raha maty ny akoho?
Rehefa mikarakara fiompy be dia be ny tantsaha, dia maro ny tantsaha miatrika olana goavana, anisan'izany ny karazam-pahaizana rehetra sy ny fikorontanan'ny fikambanan'ny avonavona. Ny iray amin'ireo mahazatra indrindra amin'izy ireo dia ny fahalavoana eo amin'ny paiso ireo akoho tanora. Manana fiantraikany goavana ho an'ny tanora ny trangan-javatra, satria ny fahatsapana haingana ny vatana dia mety hiteraka fahafatesan'ny voay manontolo.
Ny fomba sy ny fomba tokony hitondran'ny zazakely pullorosis
Ny akoho kely dia manjary aretina maro izay matetika miteraka fahafatesana amin'ny herinandro voalohany amin'ny fiainany. Mazava ho azy fa sarotra ho an'ny mpamboly vongan-tsakafo vaovao ny hitadidy ireo karazana aretina rehetra azo atao, saingy tokony ho fantatrao ny tena mahazatra. Anatin'ity lahatsoratra ity, handinika ny olana malaza toy ny pullorosis isika, ary hilaza aminareo ny soritr'aretina, ny aretina ary ny fitsaboana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Chicken disease